Mudaharaad ka dhan ah gabdho la la'yahay - BBC News Somali
Mudaharaad ka dhan ah gabdho la la'yahay
Dumar ka caraysay gabdhihii laga afduubtay iskuul ku yaalla Nigeria
Boqolaal dibadbaxayaal ah oo u badan dumar, ayaa socdaal ku maray gudaha magaala madaxda dalka Nigeria ee Abuja, si ay cadaadis dowladda ugu saaraan badbaadinta 230 gabdhood oo laba todobaad ka hor laga afduubtay iskuul.
Qaar ka mid ah dadkii mudaharaadka dhigayay ayaa ugu baaqay dowladda in ay la xaajooto kooxdii gabdhaha qafaalatay, haddii ay macquul tahay loo soo furto gabdhahaasi.
Kooxda islaamiga ee Boko Haram ayaa lagu eedeeyay afduubka gabdhahani, oo laga ka xaystay iskuul ku yaala deegaanka Chibok ee woqooyi bari Nigeria.
Boko Haram marnaba kama aysan jawaabin eedeymahaasi loo soo jeediyay.
Qabanqaabiyayaashii mudaharaadkani ayaa sheegay in 500 oo qof oo u badan dumar ku lebisan dhar cadaan ah, ay u dhabar adeegeen roob xoogga oo halkaasi ka da’yay kaddibna ay socod ku tageen dhismaha baarlamaanka dalkaasi, halkaasi oo ay warqad cabasho ah u gudbiyeen dowladda oo ay sheegeen in aysan wax badan ka qaban sidii loo soo dayn lahaa gabdhahaasi.
Waalidiinta dhalay gabdhahaasi la qafaashay, ayaa dhaliilay sida ay dowladda u raadinayso gabdhahaasi iyo dadaalkeeda badbaadinta, waxaana in badan lagu murunsan yahay tirada rasmiga ah ee gabdhaha maqan.
Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Nigeria, Abba Moro oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in uu fahmayo qiirada ka dhalatay afduubkaasi, balse aysan dowladda shaacin karaynin macluumaadka ku saabsan tallaabooyinka ay qaadeyso si ay u soo badbaadiso gabdhaha.
Waxa uu ku eedeeyay xisbiyada mucaaradka in ay arrintu siyaasadeynayaan, waxa uu intaasi ku daray in ay tahay in ay la shaqeeyaan dowladda halka ay dhaliil u soo jeedin lahaayeen.
Gabdho ka soo badbaaday Boko Haram
Nigeria: Jahawareer gabdhihii la afduubay
49 Daqiiqadood ka hor